April 2017 - Page 2 of 12 - Puntland Mirror Believable Media Website
April 27, 2017 Abdi Omar Bile 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Wasiirka Amniga Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab ayaa shalay oo Arbaco ahayd wacad ku maray in ay la dagaalami doonaan ururada argagixisada ah iyo ficilada burcadbadeeda. Isaga oo wariyeyaasha kula hadlayay gudaha Garoowe […]
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland’s Security Minister Abdi Hersi Ali Qarjab on Wednesday vowed to fight terrorist groups and acts of piracy. Speaking to reporters in Garowe Qarjab said: “Puntland is entering a war against terrorism and […]
April 26, 2017 Puntland Mirror 0
Boosaaso-(Puntland Mirror) Ciidamada booliiska gobolka Bari ee Puntland ayaa maanta oo Arbaco ah magaalada Boosaaso kusoo bandhigay waxyaabo qarxa iyo shan nin oo watay, sida ay sheegeen saraakiisha ammaanka. Taliyaha booliiska qaybta gobolka Bari Gaashaanle […]
April 25, 2017 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa u safray dalka Turkiga maanta oo Talaado ah. Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa marti-qaad ka helay dhiggiisa dalka Turkiga Reccep Tayip Erdogan. Wasiirka Arrimaha Dibada Soomaaliya Yuusuf Garaad […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Haayada Arrimaha Insaanimada iyo Maareynta Musiibooyin ee Puntland (HADMA) ayaa uga digtay dadka reer guuraaga ah in ay xoolahooda jiriyaan iyadoo la filayo in roobab mahiigaan ah ay ka da’aan qaybo kamid ah […]
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland’s Humanitarian Affairs and Disaster Management (HADMA) warned rural families to shelter their livestock as heavy showers expected in parts of Puntland next days. The director of HADMA Abdullahi Ahmed Ayrow told local […]
April 24, 2017 Puntland Mirror 0
It was not that long ago when Jilab, Laan-Khadijo, the two dry streams and other land surrounding Garowe city – however hot and dry they got – were beautiful grasslands and valleys, transformed into lush green […]
Muddo dheer lagama joogo markii Jilab, Laan-Khadiijo, labada tog iyo dhulka kale oo ku hareeraysan magaalada Garoowe – si kastaba kulayl iyo qalayl ha u ahaadeene – ay ahaayeen dhul caws qurux badan leh iyo dooxooyin, […]
April 23, 2017 Puntland Mirror 0
Baydhabo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa maanta oo Axad ah safar ku tagay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Madaxweynaha ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Baydhabo si diiran ugu soo dhaweeyay masuuliyiinta maamulka Koonfur […]
April 23, 2017 Abdi Omar Bile 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Miinada wadada dhinaceeda lagu aaso ayaa lala eegtay gaari ciidan oo ay saarnaayeen askar katirsan Puntland oo marayay gudaha tuulada Galgala ee gobolka Bari, waxaana ku dhintay sagaal askari, sida ay sheegeen ilo-wareedyo […]